सरकारलाई आश्चर्यचकित पार्ने पालो कांग्रेसको, नागरिकता विधेयक सच्याउनुपर्छ : गगन थापा | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home राजनीति सरकारलाई आश्चर्यचकित पार्ने पालो कांग्रेसको, नागरिकता विधेयक सच्याउनुपर्छ : गगन थापा
सरकारलाई आश्चर्यचकित पार्ने पालो कांग्रेसको, नागरिकता विधेयक सच्याउनुपर्छ : गगन थापा
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसारलाई नेपालले आश्चर्यचकित बनाएको बताएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अब विपक्षी कांग्रेसले सरकारलाई आश्चर्यचकित बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै उनले हालै विपक्षीको अवरोधका बाबजुद चिकित्सा विधेयक पास गरिएको घटना आफूहरुले नबिर्सने बताए । अब कांग्रेसले संसद् र सडकबाट सरकारलाई आश्चर्यचकित बनाइदिने चेतावनी उनले दिए ।
आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीलाई सरकारलाई ‘देखाइदिएको’ मा व्यंग्य गर्दै उनले सरकार र सत्तारुढ पार्टीलाई बधाइ दिएका थिए । उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरिए पनि सत्तापक्षको स्वार्थ पूरा हुन नदिने नदिने बताए । उनले विधेयक पास भएपछि लोकमान सिंह कार्की र मेडिकल कलेजवालाहरु खुसी हुने अवस्था आएको बताएका थिए ।
नले दुई तिहाईको प्रयोग डा. गोविन्द केसीको विरुद्धमा भएपनि जनताको पक्षमा भने नभएको जनाए । प्रधानमन्त्रीले छल र वितण्डतावादी शैली अपनाएको भन्दै उनले आलोचना गरे ।
प्रधानमन्त्रीले आफूले भ्रष्टाचारीको अनुहार नहेर्ने बताएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै थापाले अब प्रम ओलीले ऐना हेर्न पनि बन्द गर्नुपर्ने हो कि भनेर व्यंग्य गरे । उनले प्रतिपक्षी जिम्मेवार भएकोले अब संसद अवरुद्ध नगर्ने बताए । थापाले भेनेजुएला प्रकरणमा बोलेर सरकारले अनावश्यक काम गरेको टिप्पणी गरे ।
आजको बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ माथि दफावार छलफल जारी रह्यो । थापाले नागरिकता प्राप्ति गरेको एक वर्षभित्र थर सच्याउन चाहेमा सच्याउन सक्ने प्रावधान राख्न सुझाव राखे ।
सोही पार्टीका सुजाता परियार, उमा रेग्मी र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संविधानको भावनाअनुसार नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ल्याउन सुझाव दिँदै आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्ति गर्न सहज बनाउनुपर्छ, भने ।
नेकपाका रेखा शर्मा, विन्दा पाण्डे र यशोदा सुवेदीले शैक्षिक प्रमाणपत्रभन्दा जन्मदर्तालाई नागरिकता प्राप्तिको आधार बनाउन आफ्नो धारणा राखे । समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले नागरिकतासम्बन्धी संविधानको व्यवस्था र आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्तिमा अझ सहज हुने तरिकाबाट विधेयक आउनेछ, भनिन् ।
विधेयकमाथिको दफावार छलफल जारी रहेको छ ।